Himalaya Dainik » अधिराजकुमारी श्रुतिसँग सम्झनाका चार पल !
अधिराजकुमारी श्रुतिसँग सम्झनाका चार पल !
त्यस बेला दिवंगत हुनेमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजन लगायत वीरेन्द्रका दिदीहरू शान्ति सिंह र शारदा शाह, भिनाजु कुमार खड्गविक्रम शाह लगायत दस जना शाही परिवार र नातेदार थिए। दिपेन्द्रले सनकमा पारिवारिक जमघटबीच गो’ली च’लाएर त्यो बित’ण्ड मच्चा’एको मानिन्छ।
अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको बिगबिगी थिएन। मोबाइल फोनको पहुँच पनि सीमित रहेका बेला मेरो घरमा मध्यराततिर फोन बज्यो। दरबार ह-त्याका-ण्डबारे सुनेर म अचम्म र स्तब्ध भएँ। हो-होइन यकिन गर्न चिनजानका पत्रकार र दरबारनिकट साथीहरूलाई फोन गर्दागर्दै रात कट्यो।
त्यत्तिकैमा हाम्रा साथीहरूको एउटा वृत्तमा कुमार खड्गविक्रम र अधिराजकुमारी शारदा पनि परेको खबर घुम्न थाल्यो। मृ-तक र घाइ-तेहरू छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा राखिएको खबर सुन्नेबित्तिकै म छाउनीतिर लागेँ। कुमार खड्गका छोरा दिवस शाह हाम्रा नजिकका मित्र थिए।
छाउनी अस्पतालको गेट बन्द थियो। भित्र छिर्न पनि नि-षेध। एक-दुइटा फोन गरेपछि मलाई भित्रबाट कोही लिन आए। म अस्पताल पुगेको केही छिनमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्यो। तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र ओर्लिए। राजपरिवार एवं शाही नातेदारहरूको बाक्लो उपस्थिति भइसकेको थियो।
भित्र अरू केही साथीहरू भेट भए। हामी सबै साथीहरू दिवससँगै बस्यौं। के भएको, कसरी भएको यकिनसाथ भन्ने कोही थिएनन्। सबै स्तब्ध थिए। केही घन्टा त्यहाँ बसेपछि श-वहरूलाई अन्तिम दर्शनका लागि अस्पतालकै प्रांगणमा ल्याउने र त्यहाँबाट श-वयात्रा चलाउने कुरा सुन्यौं।
सबैका आँखा अस्पतालको चउरमा सेनाले उठाएको पालतिर गयो। केही क्षणमा श-वको लश्कर लाग्यो।दरबारको मर्यादाअनुरुप शवहरू क्रमबद्ध राखिएका थिए। केही क्षण अघिसम्मका राजारानी त्यहाँ श-व भएर शान्त मुद्रामा लम्पसार थिए। उपस्थित सबैले श-वको दर्शन गरेपछि श-वयात्राको क्रम सुरू भयो।
श-वयात्रा पनि मर्यादाक्रमअनुसार चलाइएको थियो। पहिले राजा अनि रानी, त्यसपछि अधिराजकुमार अनि क्रमशः अरू।राजारानीको श-वयात्रा निस्केपछि हामी अधिराजकुमारी शारदा र कुमार खड्गविक्रमका श-वसँगै कमलादीस्थित शारदा सदन पुग्यौं।
मर्यादा क्रमअनुसार पशुपति आर्यघाटमा श-वहरूको लाइन थियो। विशेष परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न आर्यघाटको १ नम्बर र २ नम्बर चिताको बीचमा अर्को एउटा अस्थायी चिता बनाइएको थियो। राजा वीरेन्द्र १ नम्बर चितामा र बाँकी दुइटामा रानी ऐश्वर्य र अधिराजकुमार निराजन जलाइए।हरेक श-वको अन्तिम संस्कारका लागि सेनाको सम्मान गारद फरक थियो।
किशोर राजभण्डारीले खिचेको आर्यघाटको यो तस्बिर ‘लडाइँमा जनता’ बाट लिइएको हो।
पहिलो खेपको काम सुरू भएको खबर आएपछि कमलादीबाट अधिराजकुमारी शारदा र कुमार खड्गविक्रमको श-वयात्राको तयारी चल्यो। ढोकाबाट श-व निकाल्न नहुने परम्पराअनुरुप पूर्वतिर पर्खालको एक भाग भत्काइएको थियो। त्यही पर्खालको बाटो निकालेर श-वयात्रा पैदलै पशुपति लगियो।
हामी मलामी पशुपति पुग्दा राजा, रानी र निराजनका चि-ता ख-रानी भइसकेका थिए। संस्कार भने सकिएको थिएन।
सबैतिर आँखा डुलाउँदै गर्दा जलिरहेको चितासँगै भुइँको एउटा श-वतिर मेरो आँखा पुग्यो। दुलहीझैं सिँगारिएकी थिइन्, अधिराजकुमारी श्रुति।
पच्चीस वर्षको कलिलो उमेरमा श्रीमान र दुई छोरी छाडेर चि-तामा ज-ल्न प्रतीक्षारत् यी अधिराजकुमारीले जिन्दगीमा सायदै कुनै कुराका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो होला। आज भने उनी चि-ताको अगाडि आफ्नो पालो कुर्दै थिइन्।
दैवको लीला भनौं, पशुपति आर्यघाटमा उनी दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकतामा समेत परेकी थिइनन्।उनी चिसो भुइँमा लम्पसार आफ्नो पालो कुरिरहिन्। हामी उनीसँगै उनको पालो कुरिरह्यौं।
बच्ची मुख छोपेर खित्का छाड्दै थिइन्, हामीलाई जिस्काएको भावमा। फोटो र टिभीमा प्रशस्तै देखेको भए पनि मैले ती बच्चीलाई प्रत्यक्ष देखेको त्यही पहिलोपटक थियो
अरू सबै त बेस थियो, तर पेट्रोल रिजर्भमा गयो भने तुरुन्तै स्टार्ट गर्न सम’स्या हुन्थ्यो। ‘सेल्फ स्टार्टर’ हुने कुरै भएन, मज्जाले किक हान्नुपर्ने। यो रो’गले हामीलाई बारम्बार दु:ख दिइरहन्थ्यो।
त्यही बेला पछाडिबाट अलि मोटो हर्न बज्यो। मैले वास्ता गरिनँ। फेरि हर्न बज्यो। म रिसको झोँकमा गा’ली गर्दै फनक्क फर्कें।त्यत्तिकैमा मेरो बायाँतिरबाट एउटा लामो कालो मर्सिडिज कार अघि बढ्यो। त्यस्ता गाडी चढ्ने मान्छे ठूलाबडा नै हुन्थे। अहिलेजस्तो छ्यापछ्याप्ती गाडी थिएनन्।
मेरो मुख गा’ली गर्दागर्दै थामियो। हल्का कालोरङको सिसाभित्र मुमा बडामहारानी रत्नको आकृति देखेँ। म ‘फ्रिज’ भएँ।
उनी भने बेप’रवाह अगाडि हेर्दै थिइन्। उनीसँगै एक जना १२–१३ वर्षकी बच्ची मुख छोपेर खित्का छाड्दै थिइन्, हामीलाई जिस्काएको भावमा। फोटो र टिभीमा प्रशस्तै देखेको भए पनि मैले ती बच्चीलाई प्रत्यक्ष देखेको त्यही पहिलोपटक थियो।
मेरो स्मरणमा अधिराजकुमारी श्रुतिको पहिलो आकृति त्यही रह्यो- चञ्चल स्वभावकी, मेरो मोटरसाइकल बि’ग्रेको र म तर्सेको देखेर मुख छोपेर जिस्क्याउँदै गएकी।
दरबार निकटका, सरकारी कर्मचारी वा सेनाका छोरीहरूले ‘सरकार’, ‘हजुर’ भनेर सम्बोधन गर्दा र झुकेर दर्शन गर्दा उनी भनिहाल्थिन्, ‘छ्या के गर्‍या होला… आई हेट ड्याट के!’
त्यसपछि स्कुलका अरू केटीहरूले पनि उनीसँग अभ’द्र व्यवहार गर्न थाले। राजतन्त्रबारे अभद्र बोली र घोचपेच गर्न थाले। उनलाई त्यस्तो व्यवहारबाट निकै चो’ट पर्ने गरेको उनका नजिकका सहपाठी सम्झन्छन्।
जनआन्दोलन सफल भयो। सबैलाई बराबर तुल्याउन ल्याइएको प्रजातन्त्रले बिचरी श्रुतिको भने साधारण बालिका हुने अधिकार खोसिदियो। उनी स्कुल आउने वातावरण बनेन। घरै बसेर २०४८ सालमा प्राइभेट एसएलसी दिइन्।
टाढाबाट भए पनि उनको लजालु अप्ठ्यारोपन मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो।उनलाई प्रत्यक्ष देखेको यो मेरो दोस्रो क्षण थियो।
टाढाबाट भए पनि उनको लजालु अप्ठ्यारोपन मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो।उनलाई प्रत्यक्ष देखेको यो मेरो दोस्रो क्षण थियो। पहिले देख्दाको चञ्चल स्वाभाविक बच्ची परिपक्व हुँदै लजालु युवती भइछिन्।
डिजिटल भिडिओको सुरूआती क्रममा हामी केही कार्यक्रम निर्माताहरू ‘वान म्यान टिम प्रोडक्सन’ मा प्रशिक्षित थियौं। कुनै कार्यक्रम खिच्न जाँदा म एक्लै जान्थेँ। माइती नेपालबाट एउटा कार्यक्रमको निम्तो आयो, जसका प्रमुख अतिथि अधिराजकुमारी श्रुति थिइन्।
मेरो स्मरणमा भएको त्यो चञ्चल बच्ची र ती लजालु युवती केही वर्षमै सहानुभूतियुक्त ममतामयी नारीका रूपमा रूपान्तरण भएको महशुस भयो मलाई
यी यादहरू दिमागमा खेल्दै थिए, पानीको बाछिटाले म झस्किएँ। बाछिटाले हानेपछि म ओत खोज्दै आर्यघाटको पाटीभित्र पसेँ। त्यहाँबाट आँखा फेरि चिसो भुइँमा लम्पसार श्रुतिमा पर्‍यो। उनको उज्यालो अनुहारमा पानी परिरहेको थियो। निधारमा पानीका केही थोपा अडेका थिए। केही धर्सो भएर बगिरहेका थिए। गालामा पनि केही थोपा टल्किरहेका थिए।
मानवीय हिसाबले सबभन्दा बढी प्रताडित थिइन् उनी। उनलाई हेर्दै उनले छाडेका दुई स-साना छोरीहरू सम्झेँ, २५ वर्षको जवानीमा छोड्नुपरेको जीवन सम्झेँ
उनले जिन्दगीमा सायद कहिल्यै यसरी पानीमा रुझ्नुपरेन होला! उनलाई छाता ओडाउने सुसारेहरू सधैं वरपर हाजिर हुन्थे होला! आज खोई उनलाई छाता ओडाउने कोही? उनलाई रुझेको देखेर म आफू ओभानो बस्नु निरर्थक लाग्यो। पाटीबाट बाहिर आएँ र आफू पनि रुझेँ।
मलाई कराउन मन लग्यो, ‘कोही मेरी राजकुमारीलाई छाता ओडाइदेऊ, रुझ्दै छिन् बिचरी!’ उनी जिन्दगीको अन्तिम संस्कारका लागि लाइनमा कुर्दै थिइन्। मर्यादाक्रममा उनीभन्दा माथिकाले सबै ध्यान खिचेको थियो। उनलाई माया गर्ने उनका पिता खरानी भइसकेका थिए।
उनका पति कुमार गोरखशमशेर त्यही घट-नामा घाइ-ते भएकाले सायद अस्पतालमै थिए। मैले त्यहाँ देखिनँ। बच्चाहरू सानै भएकाले घाट आउने कुरै भएन।
उनी एक्ली थिइन्। नितान्त एक्ली। जन्मँदा कस्तो भाग्यको जन्म, म-र्दा कस्तो अभागीको म-रण!
हरेक भाइटीकाको दिन दिर्घायूको कामनासहित पुजेको आफ्नै दाइको हातको म-रण। बालख सन्तानलाई टुहुरो पारी अँगाल्नु परेको मर-ण। राजाकी प्यारी छोरी, अधिराजकुमारी भएर पनि ओझलमा पर्न गएको त्यो म-रण। चितामा जल्न रुझ्दै कुर्नुपरेको मर-ण।
तस्बिरः विकास रौनियार-अधिराजकुमारी श्रुति
(किरणकृष्ण श्रेष्ठले लेखेको यो सामाग्री हामीले सेतोपटीबाट लिएका हाैँ)